Service - Kala Hangzhou Poly Air Qalabka Co., Ltd
adeegga iibka Pre
The user ama waaxyaha kale si run ah, hordhac ah oo faahfaahsan oo ka mid ah wax soo saarka ee shirkadda, iyo in la siiyo xogta farsamo la xiriira waa ugu kaamil ah, si ay u caawiyaan unit design ah si ay u fuliyaan is-weydaarsiga farsamo, si aad u maqashid user iyo talooyinka ka mid ah wasaaradaha ay khuseyso, in design iyo soo saaridda alaabta sida ay xaaladda dhabta ah, hagaajiyo badeecada, si loo buuxiyo shuruudaha macquul ah nidaamka qoondaynta users.Provide macquul ah in dadka isticmaala sida ay xaaladda gaaska.
In la iibiyo adeegyada
Waxaa sida ay ku habboon sharciyada, xeerarka iyo qawaaniinta gobolka iyo xuquuqda iyo waajibaadka saxiixa heshiiska si adag u hoggaansamaan shuruudaha contractperformance.- ka dib taariikhda uu dhaqan gelayo heshiis ah u isticmaala iyo Institute Design in provideequipment sawiro iyo macluumaad faahfaahsan.
Qalabka warshad The kala sooc lahayn oo leh shahaado wax soo saarka, liiska xirxiraan, shahaado kormeerka, shahaado of weelka cadaadiska iyo tilmaamaha loo isticmaalo.
xarunta shirkadda ka dib markii waaxda adeegga sale, iyo abuuritaanka ofresident xafiisyada gobolka multi qaranka, xafiiska kasta oo ku qalabeysan yahay shaqaalaha farsamada xirfadeed si ay u bixiyaan technology ee PSA iyo farsamo planfor user ugu horumarsan ee, ayaa in ka badan waqtigii ay u siiyaan dadka isticmaala tayada ka dib adeegga sale. Ka dib markii taleefan xarunta shirkadda saleservice: 13868185226/13588050818
Rakibo qalab iyo muddada komishanka, shirkadda sida uu heshiiska iyo isku raaceen si ay u bixiyaan adeegyada la xiriira.
Waxa uu helay a Telakis ama telefoonka users, servicedepartment shirkadda adeegga macaamiisha si dhakhso ah u jawaabi doonaa, haddii ay lagama maarmaan ka dib markii shaqaalaha adeegga sale gaari karaan user on-site dayactirka qalabka.
Waxaan la dhiso record user, caawin maamulka qalabka user; si joogto ah u xusuusiyo dadka isticmaala si ay ugu bedesho xiran qaybo, oo hubi qalabka iyo arrimaha u baahan fiiro gaar ah, calan kor u record adeegyada adeegga macaamiisha file, waayo, dayactirka iyo qarashka xannaaneynta qalabka hanuun xorta ah ee user.
Phone cabashada: haddii aad ku jirto habka soo wajahda shirkada officeshave kasta oo aan ku qanacsanayn, waxaad la qaybin karaa maamulka marketing xarunta polyempty ee saacadaha shaqada statutory garaac in cabashooyinka Tel: 13868185226/13588050818